sosegado : April 2010
ပီကင်းဘဲ ပီကင်းဘဲ နှင့် ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးနေတာ၊ ဘာကြောင့် ပြောနေကြတာလည်းလို့ စဉ်းစားမိတာအမှန်ပဲ၊ ဘဲကင်က နေရာတော်တော်များများမှာ ရှိပါသည်၊ မြန်မာပြည်မှာ ရွှေဘဲဆိုင်ဆိုရင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ဆိုင်ခွဲတွေမှ အများကြီး၊ မန္တလေး အေလမ်းထောင့်မှာလည်း ဘဲကင်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိပါသေးတယ်၊ စင်္ကာပူ ဟော်ကာ ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ဘဲကင် သို့မဟုတ် ဘဲထမင်းဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပီကင်းရောက်တုန်း NUS မှာအတူတူ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ပီကင်းနေ တရုတ်သူငယ်ချင်း ကောင်းမှု့နှင့် ကမ္ဘာကျော် ပီကင်းဘဲကင် ဆိုင်ကို ရောက်ခဲ့၊ စားခဲ့ရပါတယ်။
ရာဇဝင်ထဲက ဘဲကင် အကြောင်းလေးနဲနဲ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်……
ပီကင်းဘဲကင်ဟာ တရုတ်အင်ပါယာ ဘုရင်တွေအတွက် တော်ဝင်ဟင်းလျာ ဖြစ်ခဲ့တာ မင်းဆက် အဆက်ဆက်ကနေ နောက်ဆုံး မင်မင်းဆက်၊ နောက်ဆုံး အင်ပါယာ ထိပါပဲ၊
ကွန်မြူနစ်ခေတ်မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ချုအင်လိုင်က ဧည့်သည်တွေအတွက် စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်ရာကနေ ပြန်လည်ခေတ်စားလာပါတယ်၊ ယဉ်ကျေးမူ့တော်လှန်းရေးမှာ ပီကင်းဘဲကင် နည်းပညာ မပျောက်ပျက်သွားပါဘူး။
Beijing ပီကင်းမြို့တော်မှာ နာမည်ကျော် ရှေးအကျဆုံး ပီကင်းဘဲကင်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်၊ Quanjude (全聚德) နှင့် Bianyifang (便宜坊) တို့ဖြစ်ပါတယ်၊ Bianyifang ဟာပိုရှေးကျပေမဲ့၊ Quanjude က marketing ကောင်းလို့ ပိုထင်ရှားပါတယ်၊ တခြားနယ်တွေကိုလည်း franchises ပေးပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာတောင် ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ထားပါပြီ၊ Quanjude ဆိုင်မှာသွားစားကြပါတယ်၊ လူသုံးထောင်လောက် ဆန့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကြီးပါ၊ ဒါအပြင် VIP သီးသန့်အခန်း၊ အမြန်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် နှင့် ထုပ်သွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် နေရာသီးသန့်လုပ်ပေးထားပါတယ်၊ ဆိုင်မှာလာစားကြတဲ့ VIP ပုံတွေချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ ပီကင်းရောက် အမေရိကန် သမ္မတ အဆက်ဆက်ပုံတွေလည်းပါပါတယ်၊ ဘဲအကောင် ဘယ်လောက် ရှိပြီလည်း မှတ်ထားတဲ့ Hit ကောင်တာရှိပါတယ်။
Quanjude ပီကင်းဘဲကင်ဆိုင်ရှိတဲ့ Qianmen ဆိုင်တန်းတွေ၊
ပီကင်းဘဲကင် ဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ရှင်းမပြတတ်ပါဘူး၊ စားပဲစားတတ်တာကိုး၊ ဓါတ်ပုံထဲမှာကြည့်ပါ၊ ဘယ်လိုစားရလည်း ဆိုတာတော့ ဓါတ်ပုံတွေနှင့် ပြပါမယ်၊ တရုတ်ပဲဆီကြာညှိ့ တစ်မျိုးနှင့် အတူတူစားရပါတယ်၊ ကန်စွန်းဥထည့်ထားတဲ့ Hoisin sauce လို့ပြောပါတယ်၊ ကောင်းမှကောင်း၊ ကဲ ဒါကြောင့် ပီကင်းဘဲကင် နာမည်ကျော်တာကိုး။
ပီကင်းဘဲကင်ကို ယူလာပြီး chef တွေက ကျွမ်းကျင်စွာ လှီးဖြတ်ပြီးတော့ ဧည့်ခံပါတယ်၊
အဲဒီလို ကော်ပြန့်လို အပြားလေးထဲ လှီးပြီးသားဘဲကင်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ sauce ထည့်၊ လုံးပြီးထုပ်ပြီး ပါးစပ်ထဲတစ်ခါထဲထည့် စားရပါတယ်။
လုံးပြီးထုပ်ပြီး ပါးစပ်ထဲတစ်ခါထဲထည့် စားရပါတယ်။
ဒီဆိုင်ရဲ့ ပီကင်းဘဲကင်က ဒီမိသားစုက ဆင်းသက်လာပါတယ်၊
ပီကင်းရောက်တုန်း ပီကင်းဘဲကင် မစားခဲ့ဘူးလားလို့ ကွန်မင့်ထဲမှာ မေးပါတယ်၊ စားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး မှတ်စုရေးလိုက်ပါတယ်။ မရွှေစင်ဦး ဆီမှာပဲ သွားသွား သွားရည်ယိုနေရာကနေ ဒီတစ်ခါတော့ အစားအသောက် အကြောင်းလေးရေးလိုက်ပါတယ်။
ညမှာ ဘူဖေး ရွှေကျားသစ် စားသောက်ဆိုင်ကြီးမှာ သွားစားခဲ့ပါတယ်၊ လူ ထောင်ချီ စားလိုိ့ရပါတယ်၊ အရှေ့တိုင်း အနောက်တိုင်း အစားအစာတွေအပြင် အကောင်ပေါင်းစုံရပါတယ်၊ ဧည့်ကြို ဧည့်ခံတဲ့ တရုတ်မလေးတွေ တော်တော်ချောပါတယ်။
အကောင်ပေါင်းစုံ တစ်ခုချင်းရွေးထည့်ထားတယ်၊ အကောင်ရှည်လည်းပါတယ်။
Rose Tea နှင်းဆီလ္ဘက်ရည်
နောက်တနေ့ နာမည်ကျော်ပီကင်း တို့ဟူးဆိုင် သွားစားပါတယ်၊ တိုင်ဝမ်နှင့် မတူပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တို့ဟူးမကြိုက်ဘူး။
Posted by sosegado at 4/24/2010 04:44:00 PM 33 comments Links to this post
Posted by sosegado at 4/18/2010 01:11:00 AM 33 comments Links to this post
ကြီးမြတ်သော မဟာအင်ပါယာ မင်းတရားကြီး ကြွလာပါပြီ၊
ဝန်ကြီးနှင့် အမတ်တွေ၊ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားတွေ၊ ဗိုလ်ပါရဲမက်တွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားပြီး၊ တစ်ချို့မြေပြင်မှာပြားပြားဝတ်၊ မော်မဖူးရဲ၊ ရဲမက်တွေ သတိအနေအထားနဲ့နေ၊ အားလုံးပြိုင်တူပဲ ဝမ်စွေ့ ဝမ်စွေ့ ဝမ်ဝမ်စွေ့ ၊ အင်ပါယာ မင်းတရားကြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ ချီးမြင့်လိုက်သည်၊ ရွှေအဆင်း တန်ဆာကို ဆင်ယဉ်ထားသော အင်ပါယာ မင်းတရားကြီးသည် နောက်လိုက် အခြံအရံ အပါးတော်မြဲ သက်တော်စောင့်တွေနဲ့ ကြွချီလာလေပြီ ။
တံခါးဖွင့်ပေးပါ၊ တံခါးဖွင့်ပေးပါ၊ အပြင်မှာဘာဖြစ်နေသလဲ၊ ဘာတွေရှိလဲ ငါသိချင်တယ် တံခါးဖွင့်ပေးပါ၊
ကလေးအရွယ် လူမမယ် အင်ပါယာ မင်းတရားလေး နဂါးရွှေပလ္လင် ရှိရာ နန်းတော်ကြီးမှ ပြေးထွက်လာသည်၊ သက်တော်ရှည် အမတ်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးနှင့် နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားတွေ လိုက်လာပြီး၊ မသင့်မြတ်သေးပါ ဘုရား၊ အချိန်မတန်သေးပါ ဘုရား၊ ဟုဆိုကာ အင်ပါယာ မင်းတရားလေးကို နဂါးရွှေပလ္လင် နန်းတော်ဟော်ကြီး (Hall of Supreme Harmony) ထဲသို့ပြန်လည် ခေါ်ယူသွားသည်၊ အပြင်ဘက်တွင်ကား ဘုရင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအသံများ ဆူညံ့နေသည်၊ ထို အင်ပါယာ မင်းတရားလေးကား တရုတ် နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံး အင်ပါယာ ပုရီ ဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်၊ တီဗီ ဇာတ်လမ်းများ ထဲတွင်၎င်း ၊ The Last Empire ဇာတ်ကားကြီးတွင်၎င်း တွေ့မြင်ရသော အင်ပါယာ နန်းတော်ကြီးကား ကိုယ့်ရှေ့တည့်တည့်မှာပင်။
ဤနေရာသည်ကား Forbidden City တားမြစ်ထားသော မြို့တော်ဟု ထင်ရှားသော သမိုင်းဝင်နေရာ ရှေးဟောင်း တရုတ်တို့၏ နန်းတော်ကြီးပင်ဖြစ်သည်။ အပြင်လူမဝင်ရ ဝင်ရင်တောင် အခမ်းအနားနဲ့ဝင်ရသည်။
ဟုတ်တယ်၊ တကယ်တော့ တရုတ် ရာဇဝင်ကို စာလဲမဖတ်ဘူး၊ လေ့လဲမလေ့လာ၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗီ ဇာတ်လမ်းများ ထဲမှာပဲကြည့်ဘူးသည်၊ ရောက်သွားတော့ နန်းတော်အဆောက်အဦးကြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင်လုပ်ထားသည်၊ ကျုံး၊ မြို့ရိုး၊ မျှော်စင်၊ ပြစင်တွေနဲ့ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
တီယန်မင် ဘက်က မော်စီတုံး ကိုခေါင်းငုံပြီးဝင်ခဲ့သည်၊ အဝင်ဝမှာ သူ့ပုံကြီးချိတ်ထားသည့် အတွက်ဖြစ်သည်၊
အထဲဝင်လာပြီး Meridian Gate အဆောက်အဦးကြီး ငေးနေခိုက်၊
'ဟလို၊ ဟိုင်း၊ ကွန်နီချိဝ၊ ဆလာမာလေးကွန်း၊ '
'ဒူးယူဝမ့်ဂိုက်၊' 'ချိစ်၊ ဗဲရီး ချိစ်၊ စပိစ် ဂျပန်နီစ်း၊ ကိုရီယား၊ ဂျာမန်၊ မလေး၊ ပြင်သစ်၊ ထိုင်း၊ စပါနစ်၊'
'နိုးနိုး စပိစ်ဘားမိစ်၊' 'ဝှက်ဘားမိစ်၊' 'ဘားမိစ်မဲရုံ၊' ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရွယ်စုံလူကြီးလူငယ်များက ဝင်လာသောဧည့်သည်တွေကို ချဉ်းကပ်သည်၊ ဘာသာပေါင်းစုံ guide များပင်ဖြစ်သည်၊ ကိုယ်ကအစထဲက တစ်ကိုယ်တော် မြေပုံအားကိုးဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား၊ guide မခေါ်တော့၊ ဝင်ကြေး ၄၀ ပေးရသည်၊ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများ အင်္ဂလိပ်လို အခြေခံပြောနိုင်သည်၊ အိုလံပစ်လက်ကျန် ဖြစ်နိုင်သည်။
Supreme Harmony Gate ကိုဖြတ်ကာဝင်လာသည်၊ အထဲတွင် ထောင်နှင့်ချီသော ဧည့်သည်တွေသည် အခြားဒေသကလာသော တရုတ်တွေပဲ အများဆုံးဖြစ်သည်၊ ဒီတံခါးဝမှာ ရှပ်ရှင်ကားတစ်ကားထဲမှာ မင်းသား မြှားတွေ လှံတွေ စိုက်ပြီး သေသွားတယ်၊ ကိုယ့်အထင်နဲ့ လိုက်ကြည့်နေမိသည်။
နန်းတော်ထဲတွင် အဓိက နန်းဆောင်ကြီ6းခုရှိသည်၊
1. Hall of Supreme Harmony 太和殿 太和門
2. Hall of Medium Harmony 中和殿
3. Hall of Protective Harmony 保和殿
4. Hall of Heavenly Peace 乾清宫
5. Hall of Union and Peace 交泰殿
6. Hall of Earthly Peace 坤宁宫 တို့ ဖြစ်သည်။
နန်းတော်ကြီးသည် အကျယ် 720 thousand square meters ရှိပြီး၊ အဆောင်ပေါင်း 980 ကျော် ရှိကာ 1406 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက်သည်၊ UNESCO က World Cultural Heritage အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ပဒေသရာဇ် တို့ ၏ထုံးစံအတိုင်း နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို၊ ဗေဒင်ကိန်းခန်း၊ ယတြာ ၊ ဖုန်းဆွေ တွေနှင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အရာရာတိုင်း၊ နေရာတိုင်းဟာ သူ့အဓိပ္ပါယ်နှင့်သူ ဖြစ်သည်။
အပြင်နန်းဆောင်များတွင် ကြီးကျယ် အခမ်းနားဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံး နန်းဆောင်ကြီးကတော့ Hall of Supreme Harmony ဖြစ်သည်၊ နဂါးရွှေပလ္လင် ရှိသည်၊ ညီလာခံ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရေးရာတွေကို စီမံသည့် နန်းတော်ကြီးဖြစ်သည်၊ နောက်တွင် Hall of Medium Harmony (Central Harmony) ရှိသည်၊ အင်ပါယာ အနားယူသည့်နေရာ၊ ညီလာခံ၊ အခမ်းအနားတွေအတွက် အင်ပါယာကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် နန်းဆောင်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ဆောင်ကတော့ Hall of Protective Harmony (Preserving Harmony) ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပရာ၊ အင်ပါယာ စာမေးပွဲ ကျင်းပရာ နန်းဆောင်ဖြစ်သည်။
အတွင်းဆောင်တွေကို ဝင်ရန် Gate of Heavenly Peace ကိုဖြတ်ရသည်၊ နဂါးတိမ်လွှာမာဘဲလ် carved တွေ့ရမည်၊
အင်ပါယာ အိပ်စက်ရာ နန်းတော် Hall of Heavenly Peace ရှိသည်၊ အနောက်တွင် အင်ပါယာ တံဆိပ် imperial seals ထားရာ နန်းတော် Hall of Union and Peace ရှိသည်၊ ပြီးနောက် အင်ပါယာ မိဖုရား ရွေးချယ်ရာ၊ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပရာ၊ မောင်းမငယ်များ အသုံးတော်ခံ ပျော်မြူးရာ နန်းဆောင် Hall of Earthly Peace (Terrestrial Tranquility) ရှိသည်၊ များပြားသော မိဖုရား၊ မောင်းမ၊ အထိန်းတော်၊ ကိုယ်လုပ်တော်၊ သက်တော်စောင့် နေရာ အဆောင်များရှိသည်၊ မြောက်ဘက်အဆုံးမှာတော့ ဥယျာဉ်တော် Imperial Garden ကို ရောက်ပြီး၊ မြောက်ဂိတ်ပေါက် မှာပြန်ထွက်ဖြစ်သည်၊
တစ်ချို့ များ ကျယ်ကျယ် ရှင်းပြတတ်သည်၊ စိတ်ဝင်စားလျှင် ကပ်နားထောင်လိုက်ရုံ၊ မြို့တော်ကြီးထဲ ဘယ်နေရာ ဘာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်၊ ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ပုံပြင်ဆန်ဆန်၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။
မန်ချုး အနုပညာတွေနှင့် စာတွေလည်းတွေ့ရသည်၊ လူနည်းစု မန်ချုးက လူများစု ဟန်တရုတ်တွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်၊ လေးစားမိပါသည် မန်ချုးတို့ရေ။
ချန်မင်းသမီး ရေတွင်း Zhen Concubine Well ၊ Hall of Imperial Zenith ၊ Exhibition Hall နှင့် Hall of Mental Cultivation ယန်ရှင်ဒိုင် တို့လည်းထင်ရှားသည်။
ချန်မင်းသမီး လေးကို မိဖုရားခေါင်ကြီးက ဒီရေတွင်းထဲ ပစ်ချပိတ်ခဲ့တယ်၊ မိဖုရားခေါင်ကြီးလို့ဆိုရင် တရုတ်မင်းသမီး ဂေါင်လီ ကိုပဲမြင်ယောင်မိနေတယ်၊
အရုပ်တိုင်းဟာ သူ့ အဓိပ္ပါယ်နှင့်သူ၊
ဟောင်ကောင် တီဗီ ဇာတ်လမ်း တွဲထဲမှာ မိဖုရားတွေ အင်ပါယာနဲ့အိပ်ရဘို့အပြိုင်အားထုတ် ကြရာ ဒီနန်းရင်ပြင်ကြီးပါပဲ၊
ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်း ထဲမှာ မစ်ချယ်ရို ဒီခေါင်မိုးတွေပေါ် သိုင်းနှင့် ပျံနေတယ်၊
ဥယျာဉ်တော် Imperial Garden ထဲမှာ
ဂျိမ်းကင်မရွန် ဒီအပင်ကိုကြည့်ပြီး အာဗေတာ အပင် အိုင်ဒီယာ ရသွားတယ်လို့ပြောတာပဲ
မီးခဏခဏလောင်လို့ရေအိုးကြီးတွေ နေရာတိုင်းမှာ၊ တီဗီ ဇာတ်လမ်း တွဲထဲမှာ မိဖုရားလေးနှင့် ဆေးဆရာတို့ မီးရှို့ပြီးသေသွားကြတယ်၊
Gate of Divine Prowess မြောက်ဂိတ်ပေါက် ခြေညောင်းပြီ။
သဲမုန်တိုင်းကျတော့မည်တဲ့ မြောက်ဂိတ်ပေါက် ကနေလစ်ပြီ။
Posted by sosegado at 4/09/2010 10:53:00 PM 21 comments Links to this post
Posted by sosegado at 4/03/2010 10:50:00 PM 30 comments Links to this post